एसपिएम कलेजको लक्ष्यमा हाम्रो साथ हुन्छ – डा. कोइराला र कृष्णचन्द्र नेपाली
By vijayafm on	 December 15, 2017 देश, फोटो फिचर, राजनीति, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट, २९ पौष । शुक्रबार विहान साढे ९ बजे गैँडाकोट २ मा रहेको एसपिएम कलेजमा पुग्नुभएका नवनिर्वाचित नवलपुर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शंशाक कोइरालालले एसपिएम कलेजलाई नमुना बनाउन आफ्नो तवरबाट सहयोग जारी रहने बताउनुभयो । डा. कोइरालाले केही निश्चित योजनाका साथमा अघि बढेको खण्डमा त्यसमा आफ्नो सदैव साथ र सहयोग रहने बताउनुभएको छ ।
यस अघि डा. शंशाक कोइरालाकै साथ र सहयोगमा संसद विकास कोषबाट केही निश्चित रकमबाट कलेजले आफ्नो कम्पाउण्ड निर्माण समेत गरिरहेको छ । नवलपुर १(१) प्रदेश सभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले गैँडाकोटमा रहेको एसपिएमल कलेजलाई नमुना बनाउन डा. कोइराला र आफ्नो तर्फबाट कुन हदसम्म काम गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आफूहरु तयार रहेको बताउनुभयो । एसपिएम कलेज जुन लक्ष्यका साथ स्थापित भई अघि बढीरहेको छ, त्यसका लागि सहयोग रहने बताउनुभयो ।
नवनिर्वाचित नवलपुर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. कोइराला र प्रदेससभा सदस्य कृष्ण चन्द्र नेपालीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा कलेजका प्राचार्य गोविन्दराज विनोदीले कलेजलाई नमुना कलेजका रुपमा विकास गर्न र गैँडाकोटलाई उच्च शिक्षाका लागि उर्वर स्थलको रुपमा विकास गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो । यस्तै कलेजका सहप्राचार्य दीपेन्द्र पौडेलले कलेजको गुणात्मक विकासका लागि नवनिर्वाचित सदस्यहरुबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । प्राध्यापक संघका अध्यक्ष शिवजी अधिकारीले कलेजको भौतिक पूर्वाधारमा निर्वाचित सदस्यको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कलेजका संस्थापक मदनभक्त अधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्य केशवप्रसाद सापकोटा, तरुणदलका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कमल पराजुली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण माधव सिग्देलले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम कलेजका अध्यक्ष महेन्द्रभक्त अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।